Journey to Nowhere JTN Somalia | Journey To Nowhere
«Journey in ay jirto meel»
buuga- ka dayri-
Xidiguhu – duni of jinniyo, taas oo dadka Emaraadka oo ka mid ah naqshaddoodu Great Metakosmos marnaba noqon doonaa.
Jinniyadu ay leeyihiin, kuma Mashaqaynno Naf. Sidaa darteed, iyagu ma ay heli karo, waxa lagu gaari karaa in aadanuhu ay dhimanaya. Sidaa darteed, jinniyadu ay adduunka xidiguhu si joogto ah loogu ugaarsado naftoodana aadanaha lumay, iyaga looxaan meel gaar ah (The meel daloosha oo sixir Black), si aad u isticmaali lahayd iyo wixii nafta aadanaha siinayaa. Sida ku cad xeerarka ugaarsadaan tamarta nafta aadanaha laga badiyay kaliya isticmaali kartaa ruuxa wax Cidduu aadanaha oo magiciisa siiyey. Bedelkeeda, ruuxa ku diyaar u yihiin inay caawiyaan qofka si aad u hesho wax kasta oo uu rabo in nolosha dunida.
Si aad ugu yeedhi aadanaha si jinni oo adduunka xiddigaha u isticmaali luuq u gaar ah. (Martiqaad – Opus # 1)
In magaalada Mediterranean dhalinyaro ah oo agoon ah wiil Qarniyadii dhexe ee laba iyo toban kulmay ruux xidiguhu jooga Raqiib iyo (Wizard The – Opus # 2), kuwaas oo isaga ugu yeedhi Markabka (Markabka ayaa ka yimid dalka fog – Opus # 3), kaas oo ka soo qaadan doonaaye riyadiisu ahayd dunida ka fiican. Wixii wiil doorashada waa wax iska cad. (Drifter – Opus # 4)
Wixii Naftooda ku waayay baadi goob on jinniyadii Earth leeyihiin si gaar ah. Ruux Sentinel (The Wizard) eegay sida nin da ‘hodan iyo ikhlaas si joogto ah ayaa loo gudaa naftiisa raadinaya taas oo ku faraxsaneyn nolosha tan dunida oo yeedhi ama iyada Markabka (doon xidiguhu) si ay dal fog, halkaas oo mid ka heli kartaa waxa uu jeclaan lahaa .
Isla mar ahaantaa, ruuxa jooga Raqiib ma u sheegtaa qofka socotada ah oo ku saabsan xaaladaha noocan oo kale ah “naxariis.” Ciidamada Qofna tagaan Safar ah by force. Tani waxay si iskood doorashada ee qofka, kuwaas oo u baahan in la fahmo in kaliya aysan waxba dhicin lacag la’aan ah oo degdeg ah ama waqti dambe, laakiin wax kasta hal waajib in ay bixiyaan wax.
Laakiin geesiga – kaliya wiil cidlo, loogama qaadi of jacaylka waalidnimo iyo kuwa aan i arag wax Nolosha adduunyo marka laga reebo caro cadaadiskii iyo saboolnimada dhamaadka lahayn …
On markabka (halyeeyga “Dayuurada reer Holland”), Captain ugu baaqaysaa Wiil “Drifter” oo u dhoofay isaga oo leh in ay ceeryaamo Island ee (The Island of ceeryaamo – Opus # 4), kaas oo Wizard uu ka hadlay. Sida ugu dhakhsaha badan shiraac aadnay doonnida, oo Drifter ogaaday, in xiddigaha samada oo kale freezed, iyo markabka, inkastoo, waxaa loo dhaqaajiyo shiraac muuqdo joojiyay in dissect biyaha. Markab Tani waxay ku eekaan laga yaabaa in ay xeebta kasta, marka laga reebo hal jasiiradda – Island of ceeryaamo. – Dekad dunida xidiguhu.
Markan kulligood ahayn ruuxyo kaalmeeya, ku faraxsan in uu qofka dhibanaha ah ee soo socota waa mid ku waa hab farxad heeso gabay jecel yahay (Waltz shumac Black – Opus # 6). Shumac Black shiday dhimbiil oo markii wadaadka weyn ee xidiguhu waxa ay iskaga waqtiga loogu talagalay qofka socotada ah aadanaha aad u arki karto iyo dareemaan dunida oo dhan oo uu naftiisa ka heli doonaa.
Marka ay safarka ku bilaabay, jinni oo isla markiiba la ogaado waxa ku saabsan oo isku diyaarinaya in ay naf badiyay ee ay aduunka la kulmaan. (Ruux dhiiqo – Opus # 7)
Degay drifter ee jasiiradda oo ahaa sirkaalkii ugu ballan qaaday inuu ku soo laabto isaga waayo, sannaddii ah oo isaga soo jeedinaya jidka loo maro sixir ah Well oo ka jawaabi kara su’aalaha (The sidoo doonaya – 8 Opus #). Drifter heli Well iyo jeedaa, waxa uu isagoo su’aashan. Well sheegayaa isaga in “halkaas oo markii ay maamushaa ninna waxba kama oga”, laakiin waxay soo jeedinaysaa in jawaabta waxaa laga yaabaa in Town ee hararka noolaha, taas oo keentay wadada ka crystal ciid Magic ah.
Well sidoo kale si adag uga digtay drifter in kiis kasta uu ma aha in uu magaca Ninna ha u sheegin. Iyo hanuun u ah drifter uu baxsad ku jiro hoos oo kale in ay farta doonaan jidka magaalada in. Iyadoo tan maskaxda, Drifter wareegaya wadada muraayad ku xiga hoos oo kale.
Oo goor gudcur ah ee City of hararka wuxuu arkaa guryo badan, laakiin aanay waxba ka haysan daaqadaha ama albaabada (Town ee hadh – Opus # 9). Ma jiro qof in ay la hadlaan, qofna si aad u weydiiso.
Gudbayay tareynin isaga u Town ee hararka (orod Long – Opus # 10), iyo sii wadida in la raaco jidka bacaadka muraayad sixir (jid madow – Opus # 11) Drifter kulmay nooc dhabta ah ee ruuxa – Leprechaun. (Leprechaun The – Opus # 12 (lyrics Talyaaniga) .Leprechaun wuxuu ka caawiyaa Drifter, laakiin ay ogaadeen xumaanta maankooda isku day uu si aad u ogaato magaca qofka, waxaa toddling markiiba, absentmindedly ka tago ishiisa – kubada crystal ah iyo map ka mid ah jasiiradda-dalka (dhulka Sanctum), ku ayiday oo maqaarka ka mid ah abeeso (map maqaarka abeeso) a.
Meelsha banooni, Drifter arka ah oo aan la aqoon oo cajiib ah Ivory Castle (Temple of Cadaabka – Opus # 13) iyo sii jidkiisii​​. (The adduunka ee Waalli – Opus # 14) Si dhakhso ah uu la kulmo sida xuubcaaro carmal Black weyn. (Carmal Aria Black – Opus # 15) Spider isaga ayaa sheegay sheekada filimka guuray, oo wuxuu bixiyaa koox u gargaarta oo lagu badalanayo oo uu magaca (Spider – Opus # 16) ee ah.
Drifter xusa in wixii lagu la hadlay by wanaag u rajeeyay (Ha la hadal shisheeyayaal caawa – Opus # 17) iyo aamusnaan kala Jeexantay Baddii la caaro, weli Jid map ka Leprechaun ee magaalada dilaaga ah, halkaas oo uu hubiyo in waxa la yahay guriga uu Cadaabka – gaar ah meel, halkaas oo wax kasta waa in la sameeyaa.
Isagoo maraya daaratey Dead City (magaalada qaraxii – Opus # 18), hoos heesaha ugu adag ee jinniyo, ee faras magaalaha ah wuxuu arkaa qalcaddii buurta fog, isku mid, kaas oo wuxuu tusay kubada crystal ah.
Ruux ay sii wadaan ugaarsiga iyo heeso hees ku saabsan magaalada lagu hoobtay oo ay ku Queen – jinnigii saddex ama weershe ah. Waxay la yaabanahay sababta ay ku naf aadanaha uusan dooneynin in ay qaataan adduunka ee nabadda iyo waynaanta, taas oo uu leeyahay wax walba oo aad u baahan tahay inuu gashado dhimashola’aanta iyo farxad. Wiil- ee heeska waa Queen ka mid ah Ruux. Waxay hambalyeeyay iyada isha saddexaad, kaas oo u ogolaanaya inay arkaan wixii mana jinniyo, mana aadanaha ma arki karo. (Isha Saddexaad – Opus # 19)
Drifter waxa ay la xidhiidhaa dhinaca qalcaddii, laakiin si lama filaan ah uu maqlay inuu magiciisa. Waxa uu u jeesan dhinac oo quruxda yaab leh oo ah haweeney saddexda ama weershe ah arka – ka Queen dunida xidiguhu. Oo indhihiisuna waxay ahaayeen negaanaya wejigeeda. Waxa uu cabsi la dhaqaaqi, laakiin ma qaadan indhihiisa iyada, oo aan isagoo haddana hadalkii oo kale, ayuu si tartiib leh dareen qaboojinta la yaab leh ee baabbi’inta isaga gudaha u dhaco.
Oo ku taalla daafaha Drifter magaalada ay u cadaato chapel hore muraayad dillaac. Eebe waa kan xun la yaabnaa marka muraayad ah wuxuu arkaa tusaysaa of Oday Wayn.
In la joogo uu fahmo, in uu qalbigiisa ma dareemaan. Ma aha in wadne. Waxaa jira wadnaha ma at dhan. (She qalbigayga xadday – Opus # 20)
Drifter aan waxgarashada lahayn sii wado inuu isaga tago, oo eegaya uu marayo Castle, maqle codka Well, taas oo isagay maxaa meesha ka jira. (Metalayo – Opus # 21) Wuxuu oggaatay in qalcaddii, oo uu dhab ahaan u arkaa waa macbudka Laasiminay Camalkiisa.
Castle ee Ivory (ama Ivory Castle) – waa meesha quduuska ah oo jinniyo meesha ay aadaan si ay u boobaan ma aha oo kaliya. Tani waa meel ay leeyihiin qof kasta oo xidiguhu. Sidaas darteed, qof naftiisa sheegi kartaan Master waxaa ka mid ah. Wixii aadanaha Castle tani ay ahayd waqti la soo dhaafay ee safarka. Ma jiro qof ka hor inta aan meeshan lagu gaadhi karo. Drifter ma magiciisii ​​wuxuu u bixiyey weli, saasaana, waa in uu ka dhigo mid doorasho gaar ah oo la soo dhaafay ee Castle taas.
Sidaa darteed, for our geesiga meeshan u muuqataa in ay sida ugu Castle ee uu qaddar. Inside, Castle waxay leedahay wax badan oo ka mid ah muraayadaha, jidaynayey qof walba si ay u hirgeliyaan doorasho la siiyey in ay sababta ugu Ra’iisul muuqaalkiisa dunida oo dhan. Waayo, in ay tahay arrin la filan galaan oo keliya galay muraayad ku habboon oo markiiba doorashada ka la dhaqan galiyo. Muraayad walba Behind xaqiiqo kale u sugnaaday Cid ag maraaba wuu marayo. Wixii Drifter arki karay kala duwanaanta ee la kala dooranayo – muraayadaha, Queen wuxuu isaga siiyey isha saddexaad. Haddii kale, dareen dhan ah badheedhaha-safarka lagu lumin doonaa.
Drifter waa in uu qaado sare. Laakiin jinniyadu ay keeni Drifter ee Hooygooduna oo aan ku muteystay in loogu naftiisa nasiib wacan, sidii xalka ugu dambeeya, ay diyaar u tahay inay naftiisa ku waayay qaado by xeerar ay iyagu leeyihiin waa – kuwaas oo muraayad buu tegi doonaa oo u siin waxa ruuxa ka tirsan lahaa tamarta ee uu lumo waligiis naf.
Gelida Castle, Drifter cirro lehba way u arka, in gudaha dhan u sharaxan gudaha iyo Architecture-u eg a balaayiin muraayadaha. Helitaanka ilaa bartamaha hoolka, wuxuu weyddiiyey Castle si ay u muujiyaan whish dunidana waxaa laga balan qaaday isaga oo ag Wizard.
Ka dib markii erayada ugu horeeyay, derbiyada muraayado ah oo macbudka ka bilaabaan si loo yareeyo Isaga waxaa ku wareegsan, oo muraayad walba inuusan arkay oo kaliya ruux, kuwaas oo uu kula kulmay isaga tago kooxda, laakiin sidoo kale qaar kale oo badan abuuray oo xidiguhu. Markii uu booskiisa, Drifter si lama filaan ah u arka kubad crystal yar, taasoo ku muuqata jir yar oo cad muraayad lacag ah. In riixayso quusta ay joogaan, Indhihiisuu la xiray, uu tallaabooyinka u galay ….
Daqiiqad Next ma dareemi garaaca oo qalbiga ku jira, oo indhihiisii ​​furay, Drifter arkaa isaga qudhiisu meel kale ayuu meeshuu bilaabay quustay safarka iyo in fogaanshaha, iyo baaba ‘ee rays of Qorraxda oo soo Muuqata, dushana of doonni Kyung. (The qalcaddii Ivory – Opus # 22)
Early Oo aroorta wuxuu si uu magaaladiisa yimid. Qof walbo waxa uu ahaa mid kale ma jiro, laakiin kaliya nin toddled cirro lehba way jir. Drifter aad u la yaabay, isagu wuu xusuusan wax kasta, laakiin aan saaxiibbadeeda iyo derisyadeeda ma ay garan isagii. Waxa uu weli garan maayo, in la siiyo dadka magaalada uu ku dhashay habeenkii oo kaliya hal kaliya maray by …
Dhanka kale, Dhagartay bulshada iyo macluul oo jinni oo xusuusinayaa in heshiiska aan la dhamaystiro isaga. Waxay ku caddeynayaa in uu helay wixii uu lahaa (indhaha saddexaad), laakiin ay heshay ma waxa uu waa inaad iyaga siiso halkii (oo magiciisa). (Casharrada vol qaddar 1 (jinni oo soo ilaaleeya) -. Opus # 23)
Sii wadida in aad ka fikirto waxa dhacay isaga, nin jir ah ayaa ku soo laabtay gurigiisa oo oggaatay in haatan uu xaqiiqada arko by isha saddexaad, ka da’ay xidiguhu ka. (. Casharrada vol qaddar 2 (aragtida Drifter) – Opus # 24) Hadda wuu arkaa waxa aadanaha caadiga ah ma arki karaan.
Dhaawac A lama filaan ah albaabka kala gooyey nin fikiri jir. Marinkii uu u arko qof dumar ah oo qurux badan oo dhallinyaro (Cascawella – Opus # 25). Yimid xidiguhu Queen adduunka ee aadanaha, magacaabay Drifter sidii addoon oo mugdi ah, oo qalbigiisa ka tagay adduunka fog jinniyadooda. Hadalladeeda ka dib ayay noqotay abeeso weyn oo cad oo iska neefle.
Waxay sidoo kale Drifter u sheegay in nolosha kasta aadanaha waxaa uu noqon karaa waxyaabo badan oo la bedeli karo, oo ay ku jiraan magaca, laakiin by ma qalbigiisa la beddelo, qof naftiisa waxba kama bedeli karo.
Maska The dhaadheer u guurguuran, laakiin a cross jabay lacag yar ka baxday, isagoo farta ku fiiqaya, in iyadoo la kaashanayo waxaa ka mid ah, Drifter dib adduunka oo xidiguhu galay heli karaan, si uu u dhameystiro iyada ula macaamiloodaa sida ay ka taalo. (Abeeso – Opus # 26)
The ka kooban symphonic final (sagootiyey socon – Opus # 27) waa qaraw ah oo astaan ​​u ah xasuusta nin, oo xusa in wax walba oo dhacay isaga, ka hor waa in uu ku laabto si aad u hesho oo dunida laga soo boodid xidiguhu qaataan dib uu qalbigiisa.
“Waxaan la kulmay DIMA markii ugu horeysay ee ku sugnayd ee Moscow, waxaana isla markiiba waxaa ku dhacay off oo si dhaqso ah u noqday saaxiibo fiican. Wuxuu ka mid ahaa laba sarkaal oo ka 9th Department mucaaradka oo taariikhda waaxda la soo bandhigin oo la cufflinks ka ahayd Madaxweynaha Mareykanka, DIMA yahay Madaxweynaha Ruushka Association ee ilaalada iyo iga codsadey inaan ku biiro ururka in uu ku horumariyo xiriirka caalamiga ah ee kaas oo lagu i sharfay in uu aqbalo, oo wuxuu lahaa oo qandaraasyo in la adduunka ee shirkadaha ugu waaweyn ee ilaalinta shakhsi shaqeeyaan.
Our waxqabadka la wada leeyahay oo dhalisay in la aasaaso “kooxda waardiye caalamiga Grey Hadhka ee” si ay u caawiyaan dadka dhibaato aanay u dhicin iyadoo la siinayo madal ay ka wadahadlay ammaanka la khubarada.
Oo markuu i weydiiyay in la saxaa qoraalka ah dhowr heeso waxaan ahaa kaliya faraxsan yihiin in ay ku waajibaad. Kaba sii daran waxay ahayd in aan la yaabanahay sida ay tayada is-qoraalka. Waxay ahaayeen erayo English dareen Ruushka iyo mid kasta oo iyaga ka mid ahaa oo kale ah nooc ka mid ah sheeko cirfiid, laakin macne ahaan waxaan ka mid ahayn oo dhan.
By dhamaadka 2013 dhammaanba qoraallada ee “Journey in ay jirto meel” ayaa lagu modified, oo ay la socdaan buuga- muusiga. Band waxay magacan ilaaladiisa-ka kooxdiisa helay.
Waan hubaa guys ku gaari dhawaaqa gaar ah. Waan ku soo wici lahaa opera oo casri ah, laakiin waxay u khayaalka ah ka fiirsan. Waa maxay wuxu runtii yahay – waa in aad naftaada xukumi
Madaxweynaha “Club waardiye International Grey Hadhka ee” ee